Isofa Sofa | I-China Sofa Abakhiqizi, Abahlinzeki
Okupholile kuthatha isimo esisha egumbini lakho lokuphumula nosofa waseHollyann. Isondeza isikhala sakho sasesitayeleni, sasemadolobheni, le ngcezu idlala into epholileyo ethambile nemilenze ebushelelezi, ethambile. Zigoqe ngokunethezeka, futhi ujike impela ukuhlobisa kwakho kwasekhaya.
UKestrel Sofa Chaise
Ejule kakhulu ngokubukeka kwesimanjemanje, leli qoqo liletha induduzo ethambile ethambile egumbini lokuphumula. Isihluthulelo sokuma kukanokusho kwesigaba yideski ephansi evumela indawo eningi yokuncenga ngamakhushini ezihlalo akhuluphele, amakhushini asemuva asekelayo kanye nokuphonsa imicamelo. Iphakanyiswe ngendwangu efana nelineni, isigaba sinezigaxa zovemvane emafolda amnandi nokucaciswa okuhle. Yakhiwe ngesihlalo esingenazikhali, ikona, isihlalo sothando esingenazikhali kanye ne-ottoman, isigaba sezingcezu ezine siyiCrate neBarrel kuphela.
Ngomklamo wokonga isikhala nokuguquguquka okuguquguqukayo, iStrom iletha izihlalo zesigaba samanje emakamelweni nasemafulethini amancane. Yakhiwe ngendawo yasesandleni se-loveseat ekhoneni lesokudla kanye ne-chaise engenazikhali, lesi sigaba sezingcezu ezimbili sinyuselwa kubhasikidi omnandi womndeni we-plush chenille ngobuningi bokuthinta okuthintekayo. Ama-boxy silhouettes nokugoqwa okuqinile okugoqiwe kugcwaliswa yimilenze yensimbi yesitayela yensimbi eqedwe ngombala omnyama. Isigaba seStrom esinezicucu ezimbili yiCrate neBarrel kuphela.
I-Sonoran Block Leg Sofa
Ide, iphansi futhi yenzelwe i-lounging, iPacific igcwalisa amakamelo okuphila anamuhla ngesitayela sayo esilula, esinomoya. Usofa olinganiswe kahle ulinganisela ujantshi wakhe omncane kanye nezingalo zomkhondo omncane ngomxube wesimanje wamakhushini wangemuva womcamelo, ama-bolsters kanye nomcamelo wesihlalo sebhentshi ongenamthungo. IPacific ihlala ithambile kepha ayijulile kakhulu, ikwenza kube kuhle ukuhlala endaweni encane. I-Crate & Barrel kuphela, usofa wasePacific wenziwa ngokhuni olwakhiwe lwaqinisekiswa yi-Forest Stewardship Council (FSC), indinganiso yegolide yezemvelo yamahlathi aphethwe ngendlela efanele.
UDarcy Sofa Chaise
Wonke umuntu umenyiwe ukuthi Ahlangane. Ukuthola ibhalansi ephelele phakathi kokunethezeka nesitayela sesimanje, Hlanganisa kuhlanzekile futhi kumanje. Usofa ongamasentimitha angama-98 wephula umhlabathi omusha ngephakethe elincanyana elibeka konke ukugxila kuma-boxy alo, ama-cushion esihlalo athe xaxa. Izitulo zezingalo zokugoqa ezisheshayo futhi ezingenamthungo zigcina ukubukeka kucocekile, hhayi ukuxokozela. Idizayini ekhethekile ye-Crate and Barrel, usofa we-Gather wenziwa ngokhuni olwenziwe ngobuchwepheshe oluqinisekiswe yi-Forest Stewardship Council (FSC), okuyizinga legolide lezemvelo lamahlathi aphethwe ngendlela efanele.
Emthunzini ompunga omuhle kakhulu, upholstery welineni-weave Upholstery ugcwalisa izikimu eziningi zemibala nobuhle. Izingalo ezivuthayo, imicamelo evelele yokwamukela nokukhanyisa i-flamestitch yengeza nje i-panache eyanele kulo sofa oswidi futhi olula. Ama-cushion esihlalo asekelayo enza iphedi eyodwa ekhululekile.